Izinduku Zecarbide, I-Carbide Die Eqinisiwe, I-Carbide Strip - Toonney
Isihloko se-Die Core
Isithando Somlilo Sintering
Njengomkhiqizi osebenza kahle wePowder Metallurgy industry, imikhiqizo yethu ifaka izinduku ze-tungsten carbide, i-tungsten carbide ehamba ngamakholi we-die, i-tungsten carbide endmills nezinhlobo ze-Powder Metallurgy Equipments.
Abanye ngenkampani yethu
UMASIFUNDISANE CISHE 20000M2
I-Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd.yinkampani egxila ekucwaningeni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni imikhiqizo ye-tungsten carbide. Imboni yaseToonney itholakala eXiamen, idolobha elisogwini eSifundazweni saseFujian eChina, idolobha elidume ngezimboni eziphezulu ze-tungsten carbide. Ama-workshops kaToonney Carbide Bar Plant ahlanganisa indawo engaba ngamamitha-skwele angama-8,000, ingqimba yezitezi ezintathu, ifakwe ulayini wokukhiqiza osezingeni lobuchwepheshe bamuva, angathola imikhiqizo ye-tungsten carbide enamathele njenge-tungsten carbide rod, enze, i-carbide ingenalutho njll kusuka i-tungsten carbide ne-cobalt powder.
Ikhwalithi yanamuhla iholela ezimakethe zakusasa.
Khulumela ukuqamba, hlonipha ulwazi.
Ukwaneliseka kwamakhasimende ukuphela kwesilinganiso semisebenzi yethu.
I-Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd.
Umkhiqizi oholayo wemikhiqizo ye-tungsten carbide